Ezweni lethu elikhulukazi, abantu bazizwe njalo yokukhathala, okuyinto ngeke umsindise ngisho ukulala kahle ebusuku. Kodwa azivamile ucabange indlela umbhede ekuseni kahle babukeka waphumula, waqabuleka futhi uzizwe kuqubule amandla.
Empeleni, izinga ukuphumula ngesikhathi sokulala kuxhomeke ezicini eziningi bangaphandle ukuthi kufanele kubhekwe. Ngokwesibonelo, ukuze umzimba lathambisa waphumula ubusuku, kufanele uthathe ukuma lesifanele. Kukhona 3 ukuma ejwayelekile ebangela ubuthongo okwesikhashana:
ü On esiswini
ü On ngemuva
Odokotela abuthole Izimo ukulala ngesisu sakho. Kodwa ukuma okunjalo kudinga ukujika ikhanda, ngakho ukuthi kukhona abanjwe Umthambo noma ohlangothini lwesobunxele noma kwesokudla entanyeni. Ngenxa yalokhu, ukugeleza kwegazi eliya ebuchosheni is ngqo ziyancipha futhi ematisa ke umoya-mpilo. Ngakho-ke, umuzwa ngokwenama kufanele kulindeleke.
Isimo ekahle yobuthongo isikhundla ngemuva. Kodwa kulokhu kufanele wazi ngokucacile ukuthi ungawukhipha kanjani ukulala ku umcamelo, nokuthi ukukhetha ke. Kungcono ukuthenga ekhethekile umcamelo wamathambo, elandela ijika we vertebra wesibeletho ihlinzeka ukuphumula ephelele emzimbeni. Uma airbag kwaba eliphansi kakhulu noma liphezulu kakhulu, it kakhulu kwandisa umthwalo phezu emgogodleni futhi ekuseni ungalindela ubuhlungu wonke umzimba.
Abanye ochwepheshe musa batusa ukuba ulale nohlangothi lwami lwesokunxele, njengoba kukhona umthwalo ezengeziwe enhliziyweni. Nokho lesi simangalo engakaze kungase kutholakale by amaqiniso esayensi, ancike noma cha - kukhethwa ngamunye. Lapho umuntu elele endaweni ukuma "umbungu", singaphetha ngokuthi umzimba ngempela esetshenzwa ngokweqile nesikhathi sokulala kumele lenyuke.
Ukuze uqinisekise ubuthongo okuphumuzayo futhi umsindo, kudingeka sazi ukuthi singaphila kanjani ngiyolala. Okokuqala, umuntu sokuzilibazisa idinga umoya ohlanzekile, Ngakho-ke kubalulekile ukuba pholisa ekamelweni okungenani isigamu sehora ngaphambi sokulala. Futhi, ningadakwa engadingekile njalo kusihlwa izizinda. Ukucabanga ukuthi ukulala, kufanele ukwenaba Ukukhetha kombhede ukhululekile futhi imicamelo efanele, njengoba lezi zinto ngokuyinhloko engaphansi ngokomzimba inhlalakahle emva iphupho.
Uma umuntu uhlushwa ukuqwasha noma ukwephulwa umbuso ke umbuzo: kanjani ukulala, ungaphendula ngegama elilodwa - aromatherapy. Kuyaziwa ukuthi nephunga eyaziwa noma uyakwazi toning umzimba futhi sikhuthaze ukunyakaza noma eziphumulele futhi opholile. umphumela wokugcina nje has nephunga lavender.
Kukhona umthetho ngokuvamile ukuthi uncoma ngaphambi kokulala ukuba dream of into emnandi. Lokhu zokukhwabanisa mukela inqubo ukulungiselela ukulala phansi ebusuku, okuyinto siphuce ngokuzenzakalela umuntu isikhathi ukuphumula okuhle. Inketho engcono kakhulu ukukhulisa ukukhululwa kwengqondo yakhe yonke imicabango, kungcono ihora ngaphambi sokulala ukuqinisekisa isimo esizolile akudingi umsebenzi asebenzayo ingqondo. Ezweni lethu iningi labantu uthanda ukuzumeka imisindvo izinhlelo zethelevishini. It is nhlobo, ngoba enganakile ebusuku icubungula ulwazi wathola, ngakho umuntu ubona amaphupho ephazamisayo, ngemva kwalokho evuka nangengqondo empunga.
Isici esibalulekile ngokulinganayo ezithinta ukulala okunempilo isiko ukudla. Kungcono ukuba ahlele ekudleni kwakho ukuze umehluko phakathi esidlweni sokugcina futhi sokulala idlule 4 amahora. Njengoba ubuthongo usuthi akuyona eqinile, umzimba akuncikile, ngenxa yokuthi ephoqelelwe ukucubungula kilojoule amukele amandla.
Ngakho, uma unentshisekelo umbuzo, indlela ukulala, lezi izindlela ezilula ezingakusiza wenze iphupho - iholidi yangempela.